12 सेक्स प्रश्नहरू महिला गोप्य जवाफ चाहनुहुन्छ
महिला निजी टक: 12 सेक्स प्रश्नहरू महिला गोप्य जवाफ चाहनुहुन्छ
शीर्षकहरू:12 सेक्स प्रश्नहरू महिला गोप्य जवाफ चाहनुहुन्छSex questions	पोस्ट: Fisayo
अगस्ट 15, 2016
का यहाँ अग्रिमसँग होस्, त्यहाँ महिला बाहिर ठूलो स्वरले सोध्न पनि डराउँछन् भन्ने केही प्रश्नहरू सेक्स मा सीमा छन्. तिनीहरू गर्लफ्रेंड्स वा पतिको माग गर्न सक्दैन, र निश्चित पनि तिनीहरूले यी कुराहरू जवाफ खोज्न पनि लज्जित छन् किनभने आफ्नो gynecologists अनुरोध गर्न सक्छ. तर चिन्ता छैन, तपाईं प्रश्नहरू सबै सोधे र यहाँ जवाफ हुनुहुन्छ किनभने गुगल जवाफ अब छैन.
यसलाई बलियो सेक्स मेरा साझेदार गरेको लिंग चोट गर्न सम्भव छ?
जवाफ हो छ. मानिसको लिंग हड्डी वा फलाम बनेको छैन, यसलाई उत्तेजना मा रगतले engorges एक पोत छ, त्यो साइकल पनि सक्रिय हुन्छ भने त शीर्ष मा एक सक्रिय महिला कुरा चोट लाग्नु गर्न सक्नुहुन्छ. यो मोड गर्न सक्छन् र पनि लिंग मा चोट नेतृत्व, त्यसैले अंग क्षतिग्रस्त किनभने सकिँदैन र सुधारात्मक सर्जरी पछि कुरूप अनुवाद यो सबै भन्दा राम्रो सजिलो लिन छ.
यो कंडोम मलाई भित्र गिर सम्भव छ?
यो कंडोम सक्रिय सेक्स को समयमा बन्द पर्ची गर्न को लागि धेरै साधारण छ तर यो विरलै हुन्छ. सबै भन्दा राम्रो कुरा एक महिला गर्न सक्नुहुन्छ धैर्यपूर्वक रबर प्राप्त गर्न र त्यसपछि यसको सामग्री गिरा थिएन सुनिश्चित छ. यस्तो कंडोम फेरि पुन: प्रयोग गर्न हुँदैन तर एउटा नयाँ. यो घटना अक्सर धेरै सानो सम्पत्ति मानिसहरूसँग हुन्छ.
म सेक्स को समयमा संभोग प्राप्त गाह्रो किन गर्छन्?
तपाईं सेक्स को समयमा संभोग हासिल गर्न असफल यदि तपाईं केहि तपाईं गलत छैन. सत्य केही महिला सेक्स को समयमा संभोग छ कि छ, clitoral उत्तेजना समयमा अरूलाई, अहिलेसम्म हस्तमैथुन मार्फत अरूलाई, र अन्य विधिहरू संयोजन मार्फत अरूलाई. यो तथापि औंल्याए हुनुपर्छ एक महिला हरेक समय Climax पुग्न ओछ्यानमा उचित आत्म-सम्मान र विश्वास आवश्यक छ कि; र यो यी libido र यौन प्रतिक्रिया असर गर्न सक्छ देखि बन्द लागूपदार्थ रहन सबै भन्दा राम्रो छ.
म सेक्स को समयमा पिशाब गर्न आवश्यकता किन महसुस गर्छन्?
खैर, सत्य पिशाब गर्न भावना मात्र भावना छ भन्ने छ, शायद कसैले सेक्स को समयमा पिशाब गर्न आवश्यकता अनुभव गर्छ. एक महिला त्यो सेक्स को समयमा पिशाब गर्न आवश्यक महसुस हुँदा विशेषज्ञ भन्न, यो उनको पुरुष उनको जी-स्पट मा राम्रो मार छ र यो लगभग उनको संभोग नजिक ल्याउन हुनेछ अर्थ.
सेक्स के म मेरो योनी बनाउँछ जब बारेमा के गर्न सक्नुहुन्छ सुनिन्छ?
यो queefing भनिन्छ र साना तपाईं यसलाई बारेमा के गर्न सक्नुहुन्छ केही गर्न वास्तवमा त्यहाँ छ. तपाईं सहवास समयमा मारा हुनुहुन्छ रूपमा आफ्नो "ओवन" भित्र फन्दामा हावा पलायन हुँदा यो हुन्छ, र यो पनि सेक्स पछि तुरुन्तै हुन सक्छ. यो आफ्नो कुरा छाडा वा तंग छ कि छैन भनेर संग गर्न केही छ.
म सेक्स को समयमा भिजेको प्राप्त छैन. म के गर्नुपर्छ?
सबैभन्दा महिलाहरु यौन Foreplay र लैंगिक उत्तेजना समयमा अन्तर्गत तल भिजेको प्राप्त, तर यो फिल्टरग्यालेरी यौन कार्य अब हुन्छ रूपमा कम गर्न सक्नुहुन्छ. फिल्टरग्यालेरी आफ्नो मानिस तपाईं भित्र पस्नु लागि यो सजिलो बनाउँछ र यसलाई सेक्स को समयमा चोट रोक्छ, तर तपाईं Foreplay वा सेक्स को समयमा भिजेको प्राप्त छैन भने, त्यसपछि तपाईं साथै यस्तो आफैलाई चिकनाना एक Vaseline जेली रूपमा स्नेहक प्रयोग हुन सक्छ.
मेरो साथी एक गुदा चाहन्छ. म सहमत हुनुपर्छ?
तपाईं मात्र तपाईं यो संग ठीक हुनुहुन्छ भने सहमत वा परीक्षण गर्न चाहनुहुन्छ पर्छ. तर यदि, तपाईं आफ्नो साथी किन बुझ्न गर्नुपर्छ. तपाईं जाने निर्णय भने, त्यसपछि तपाईं बाहिर मदत गर्न Vaseline जेली वा अन्य स्नेहक को धेरै प्रयोग र कार्य समयमा ब्याक्टेरिया र feaces देखि रक्षा गर्न कंडोम प्रयोग गर्न निश्चित हुनुपर्छ. तपाईं वरिपरि ब्याक्टेरिया स्थानान्तरणका रोक्न योनी गर्न गुदा देखि स्विच गर्न चाहनुहुन्छ भने कंडोम अर्को एउटा परिवर्तन हुनुपर्छ.
एक महिला धारा निकलना लागि यो के मतलब?
Squirting मानिसको फटना को महिला संस्करण हो. तिनीहरूले तीव्र चासो जगायो गर्दा महिला यौन वा हस्तमैथुन समयमा धारा निकलना र आफ्नो urethra देखि तरल पदार्थ जारी. यो सबै समय हुँदैन र छैन मूत्र संग भ्रमित हुनुपर्छ, यो होइन.
आफ्नो लिंग बाङ्गो छ. मदत!
पाठ्यक्रम उहाँले मानिसको लिंग गराउँछ जो Peyronie रोग सेक्स को समयमा यो injuring फलस्वरूप बाङ्गो गर्न नभएसम्म हुन यहाँ आवश्यक कुनै मद्दत छ. तर धेरै मानिसहरू penises घुमेको छ र यसलाई कुनै अर्थ छैन, उहाँले प्रवेश गर्दा वास्तवमा उसलाई सही ठाउँमा तपाईं मारा मदत गर्न सक्छ. स्वाभाविक, मानिसहरू विभिन्न आकार छ, आकार, र रंग यसलाई आफ्नो हतियार आउँदा - महिला विभिन्न योनी र स्तन आकार गरेझैं, आकार, र रंग.
म लेसबियन अश्लील हेर्दै गर्दा चालू प्राप्त.
यो केही महिला हुन्छ र यसले अरूलाई बन्द. दुई बालिका हेर्दै गर्दा चालू प्राप्त गर्ने महिला लागि अश्लील मा यो गर्न, यो आवश्यक पनि इच्छा होइन वा अर्को केटी वा महिला संग घनिष्ठ प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ. बस जस्तै एक महिला एक छिमेकीको बारेमा fantasize सक्छ तर कहिल्यै उसलाई एउटा वास्तविक यौन कार्य चाहनुहुन्छ.
म आफ्नो लिंग अझै पनि ठूलो वा धेरै सानो छ भने के गर्न सक्नुहुन्छ?
तपाईं सँगै यो बारेमा कुरा गर्न तर गर्न सक्नुहुन्छ केही छ - तपाईं सानो कुरा महसुस छैन, विशेष गरी यदि वा ठूलो एक सेक्स को समयमा तपाईं दुख्छ. तर अर्को कुरा: आफ्नो हतियार पनि ठूलो छ भने तपाईं प्रशस्त स्नेहक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईं पनि एक ठूलो अंग संग घटना को पाठ्यक्रम गरिदिएको भनेर माथि हुन सक्छ; र एक साना संग, आफ्नो मान्छे फरक स्थान प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईं खुसी पार्न आफ्नो औंलाहरु र मुख प्रयोग.
म मेरो साथी मसँग मौखिक गर्न चाहनुहुन्छ.
यदि छ तपाईं त के चाहनुहुन्छ तपाईं उसलाई देखाउनुपर्छ. धेरै मानिसहरू त्यहाँ तल चूसना गर्न रुचि छैन तर तपाईं चिटिक्क र ताजा तल घर भएर योग्य देखाउनुपर्छ. उहाँले मौखिक मा राम्रो छ भने, त्यसपछि तपाईं उसलाई दिएर मदत पर्छ गति मा संकेत, उहाँले आफ्नो गुफा को संवेदनशील भागहरु लागू सक्छ गति र दबाब.
शमू गरेर लेख
अधिक सूचनात्मक लागि, सहयोगी, र सामयिक स्वास्थ्य र फिटनेस सामग्रीहरू राम्ररी अनुसन्धान, यात्रा www.HealthFitnessResource.com
टिप्पणी गर्न पहिलो हुनुहोस् मा "महिला निजी टक: 12 सेक्स प्रश्नहरू महिला गोप्य जवाफ चाहनुहुन्छ"
टिप्पणी छोड्नुहोस् जवाफ रद्द	आफ्नो इमेल ठेगाना प्रकाशित गरिने छैन.टिप्पणीनाम *
तपाईं एक मानिस वा एक महिला हुनुहुन्छ कि यो कुरा छैन: अतिरिक्त चीनी लागि खराब छ र यो हत्या…
अगस्ट 15, 2015
यौन Dysfunctions: प्रकार, कारण, लक्षण, र उपचार
जडानगरिरहनुहोस्!	@askIroyin पालना